Semalt: Kutyisidzira Kukuru An Online Gamer Anogona Kutarisana Nenzira Dzokutarisana Navo
Nyika yekutamba yakagadziridzwa zvikuru pamusoro pemakore gumi apfuura. Vanokuvadza havana kusiyiwa kumashure uye vanoramba vachiita zvakaipa kuburikidza nekubudisa malware uye ransomware iyo inonyanya kutarisa mumadhesi e-online. Nhasi, Max Bell, Semalt Mutungamiri Akabudirira Mutengi, anopa kutarisa zvinotyisa zvishanu zvevashandisi vepaIndaneti uye kuti vadzivise sei.
Rudzikinuro yakagadzirirwa kukuvhara kunze kwekombiyuta yako kusvikira iwe uchibhadhara mari yakatarwa sechirudzikinuro - black green fascinators. TeslaCrypt inorongwa kuti inyore mutsara-damba data yezhinji yemitambo inowanikwa mumutambo. Iwe unofanirwa kubhadhara rudzikinuro kuitira kuti uwane mafaira uye uenderere uchifarira mitambo yako yaunoda. Minecraft uye Call of Duty ndiyo miviri yemitambo yakawanda iyo iyi yekununura inozivikanwa kuti inotarirwa.
Kunyange zvazvo vateereri vepurogiramu iyi vakagumisa basa ravo rekufambisa mafaira, izvi zvidzikinuro zvichiri kunze uko uye zvinopararira nokukurumidza. Nenguva isipi, kune chigadziro chekushandura icho chakanyatsogadziriswa nekuda kwekudzikinura iwe unogona kuikwanisa uye kushandisa kuti uwane ruzivo rwetsika yako.
Vashandi Vanonyora Mashoko
Vashandi vepaIndaneti vanoverengerwawo se keyloggers. Vanotora zvigaro zve keyboard uye vanogona kutora mashoko enyu ega ega semakadhi emakadhi echikwereti. Iyi njodzi yakave yakakunda kuba vatasvi vekuwana mutsara wekuInternet akadai seChina uye Steam.
Imwe yenzira dzinoshandiswa kuparadzira makombiyuta ndeye apo munhu anenge achinetswa anogamuchira mharidzo yehurukuro kubva kune mumwe munhu mutambi kubatana neboka. Mutinozivikanwa mutambi anowanzo rumbidza varidzi nekuda kweunyanzvi hwavo uye anovakurudzira kuti vabatanidze denderedzwa yevatambi vakanaka. Mushure mezvo, munhu anenge atambudzwa anokurudzirwa kutora uye kuisa shanduro inouya yakasungwa ne keylogger. Iwe unogona kubvisa kutyisidzira uku nekushandisa imwe yezvinyorwa zvinorwisana ne-malware zvirongwa.
Kungofanana neve keyloggers, izvi zvinotyisa zvinotsigira maitiro ekugadzirwa kwehutano hwevanhu kuti vabate maitiro emakombiyuta. Munhu wacho akakwezva kuti adzivirire uye aise kutyisa kwemutambo iye waanoda kutamba kana mupfungwa chaiyo iye ari kuisa software yakaipa. Kunyange zvazvo kuisa faira kubvumira mutambi wemutambo kutamba mutambo usingatengi reisensi iyo inopinza software yakaipa inogona kukanganisa kushanda kwePC kana kubira ruzivo rwemunhu semapaswedi kana iri keylogger.
Chigadziro choga chekutyisidzira uku ndechekudzivirira kuputsika kwemashoko emitambo. Enda kune imwe nzvimbo yakakura uye uve ne-anti-virus yakasimba iyo inokwanisa kuongorora uye kubvisa iyo malware kubva pane yako yakakwana zvachose.
Ikozvino iwe unogona kutora mutambo pa smartphone yako kuti uite apo uchienda. Zvinosuruvarisa, pane mazana emashandisirwo ezvinyengeri anozvidzivirira semitambo yepamutemo. Dhaunirodha yakadaro shanduro inokanganisa foni yako. Zvinogona kuva rudzikinuro kana hutachiona huchapedza data kubva pa smartphone yako pakarepo iwe unoiisa.
Kuedza kuita zvepabonde kwakave kwakakurumbira mumakore mashomanana apfuura. Kubva pazvinenge zvese vashandisi vepa internet vane gamers vane email, hacker ichatumira email iyo yakafanana neye email yakarurama kubva kumakambani ekutanga ekubheja. Kushandura kuhutano huri mu imeyeri zvinowanzoisa adware, malware, kana spyware pamakombiyuta kana pirunhare.
Chinokosha ndechokuti iwe unofanirwa kuchenjerera paunotamba mitambo yepaIndaneti. Cherechedza zvinganobatanidza iwe paunonyanya kuvhara, mapurogiramu aunotora, uye une chirongwa chakasimba chekuchengetedzwa kwekare chinowanikwa pamakombiyuta yako nekombiyuta kuvhara zvinopisidzira izvi.